About Us - Dongguan-Amoni Hardware Co., Ltd
Rosin King umbuso rosin cindezela umklami kanye umkhiqizi. Kuyinto kwemboni, inkampani, kuba trustable insangu isizinda amathuluzi umshini umphakeli.
Rosin King ubuchwepheshe yasungulwa ngo-2015, kube ukuklama futhi akhiqize wokubacindezela, womoya kanye kagesi rosin yezindaba, rosin King futhi uphawu enail kits, rosin izikhwama, PID Isilawuli kanye Igobolondo heater.
Ngezinye rosin King Imikhiqizo, sisebenza kanzima ukuletha okungcono solventless imishini isizinda kumakhasimende ethu. Sinikeza imfundo kubantu emhlabeni wonke ngokusebenzisa yethu solventless nakho izenzakalo, ngokusebenzisa ithimba lethu ochwepheshe solventless, futhi iwebhusayithi yethu rosin -kings Play.
Sithunywe ukusakaza isizinda solventless emhlabeni wonke ngokuletha ukumaketha best imikhiqizo ekilasini ukuthi udinga cindezela rosin ekhaya noma ubheke imikhiqizo yethu grade kwezohwebo, sinalo imishini kanye nobuchwepheshe ukuze afinyelele imigomo yakho.